Ukusetyenziswa kwe-Enfuvirtide kwi-HIV, umthamo, kwicala elifanelekileyo kunye nezilumkiso-I-Shangke Chemical
Ukusetyenziswa kwe-Enfuvirtide kwi-HIV, kumthamo, ecaleni nakwizilumkiso
1. Yintoni i-Enfuvirtide?
3. Ukusetyenziswa kwe-Enfuvirtide kwi-HIV
4. Ungayisebenzisa njani i-enfuvirtide powder?
5. Idosi ye-Enfuvirtide?
6. Ziyintoni iziphumo ze-enfuvirtide?
7. Igcinwe njani i-enfuvirtide powder?
8. Olunye uphando kunye nokusetyenziswa kwi-Enfuvirtide powder
Enfuvirtide (159519-65-0) luhlobo lwe-peptide esetyenziswa kwilizwe lonyango ukuthintela i-immune immunodeficiency virus (HIV) ekosuleleni iiseli zakho ezisempilweni ezinokuthi zonyuse iziphumo zesifo emzimbeni wakho. I-Enfuvirtide okanye i-T-20 ithengiswa kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi phantsi kwegama lobuchwephesha elithi Fuzeon. Nangona kunjalo, kuxhomekeke apho uvela khona, unokufumana ukuthengiswa kwe-enfuvirtide phantsi kwegama lohlobo olwahlukileyo, kodwa zonke zinenjongo enye.
I-Enfuvirtide powder (159519-65-0) isetyenziswa kunye namanye amayeza ukunyanga i-HIV, intsholongwane enoxanduva lokufumana isifo sokugonyelwa isifo (isifo seengcongconi). Kuya kufuneka uqaphele ukuba i-Enfuvirtide ayinyangi i-HIV, kodwa iyanceda ekwehliseni ifuthe layo kunye nefuthe emzimbeni wakho. Abantu abathatha le mveliso baphila ubomi obulungileyo nobusempilweni kuba iiseli zabo zikhuselekile kwintsholongwane. Ngokwezifundo, i-HIV yintsholongwane eyosulela iiseli ezimhlophe emzimbeni wakho ezinoxanduva lokulwa nezifo. Kungenxa yoko, kwiimeko ezininzi, abaguli be-HIV / AIDS befumana amanqanaba asezantsi omzimba. Nangona kunjalo, i-Enfuvirtide iyanceda ekukhuseleni iiseli zakho ezisempilweni nakowuphi na umonakalo, yiyo loo nto iphucula imeko yakho yezempilo.
I-Enfuvirtide acetate inciphisa inani le-HIV emzimbeni wakho, elinceda ekunyuseni amajoni akho omzimba. Imveliso ikunceda ukwehlise amathuba okufumana iingxaki ze-HIV ezifana nosulelo oluhlasela kakhulu izigulana ze-HIV. Njengoko uthatha amanye amayeza e-HIV / AIDS, ihlala ilicebo elihle ukubakhapha kunye ne-Enfuvirtide kuba inceda iyeza ukuba lisebenze ngcono kwaye liphucule ukusebenza kwabo.
Enfuvirtide Ifumaneka ngamaqonga ahlukeneyo kodwa kufuneka ithengiswe phantsi komyalelo kagqirha. Ke ngoko, ngaphambi kokuba uqale ukuthatha le mveliso, qiniseka ukuba uye kuxilongwa kugqirha, kwaye ufumana unyango olululo kugqirha wakho. I-Enfuvirtide acetate iyafumaneka kwi-Intanethi, kwaye unokwenza i-odolo yakho kwintuthuzelo yendlu yakho okanye eofisini. Nangona kunjalo, yenza uphando olufanelekileyo ukuqonda umenzi kunye nomthengisi ngaphambi kokwenza iodolo yakho. Ixabiso le-enfuvirtide linokwahluka ngokuxhomekeka kumthengisi. Zininzi izinto zonyango lomgunyaziso kwintengiso ezinokuyenza mandundu imeko yakho. Ukuba akuqinisekanga ngendawo oza kuyifumana kuyo le nyeza, thetha ugqirha wakho ukuba ufuna uncedo olungaphezulu.
Njengoko kuchaziwe ngaphambili, Infuvirtide inaliti ngamayeza asetyenziswa kunyango lwe-HIV. Intsholongwane ayikhuli okanye iphindaphindeke ngokwayo, kwaye ke, ihlasela iiseli zomzimba zisebenzisa imetabolism yazo. Intsholongwane kaGawulayo ihlasela kakhulu iiseli zakho zomzimba ezaziwa ngokuba zii-CD4 T-lymphocyte okanye iiseli ezimhlophe zegazi. Iiseli zisebenza ngokulwa naluphi na usulelo, ukuzama ukungena kwinkqubo yakho yomzimba. Kwinkqubo yokuphindaphinda, i-HIV ibulala iiseli zomncedisi ze-CD4 T, kwaye, ngenxa yoko, umzimba wakho uye ube buthathaka, usenza singakwazi ukulwa naziphi na izifo ezilandelayo. Oko kuthetha ukuba uzaosulelwa sisifo uninzi lwezifo oya kuvezwa kuso kuba umzimba wakho ungakwazi ukuzilwisa.
Indlela yokusebenza ye-Enfuvirtide yokuqinisekisa ukuba iiseli zakho ze-CD4 zikhuselekile ekuhlaselweni yi-HIV. Imveliso ibopha iprotheyini ejikeleze intsholongwane, eyinceda ukuba incamathele kwiiseli zeCD4. Nje ukuba i-enfuvirtide ifakwe kwezi proteni, ithintela intsholongwane kagawulayo ukuba ingasebenzi nge-CD4 yakho membrane. Qaphela ukuba, i-HIV inokuphindaphinda kuphela kwaye inyuke xa izinto zayo zemvelo zingena kwiiseli ze-CD4 yakho. Ke, i-enfuvirtide iqinisekisa ukuba intsholongwane ayiziveli kwaye ikhula ngamanani.
le Indlela yokusebenza ye-Enfuvirtide yahlukile kuwo onke amanye amayeza alwa nentsholongwane kaGawulayo emarikeni, alwa intsholongwane kuphela emva kokubaosulele iiseli zakho ze-CD4. I-Enfuvirtide i-HIV, ke, lelinye lawona mayeza anokulwa ne-HIV kwaye anokusetyenziselwa ukulwa nokukhula kwentsholongwane xa sele ingamelana namanye amachiza. Nangona kunjalo, usenokuthatha i-Enfuvirtide yodwa okanye uyenze ukhetho lwakho lokuqala, kwaye iya kuzisa iziphumo ezifunwayo. Ukuza kuthi ga ngoku, alukho unyango lwe-HIV olwaziwayo, kodwa nge-enfuvirtide, unokuqiniseka ngokuthoba inani leentsholongwane emzimbeni wakho kwaye unciphise ukuqhubela phambili kwanaso nasiphi na isigulo esibangelwa lusulelo lwe-HIV / AIDS.
Iingcali zicebisa ukuba uthathe i-enfuvirtide powder kunye namanye amayeza okulwa ne-HIV ahlasela intsholongwane ngeendlela ezahlukeneyo. Yongeza i i-peptide powder Unyango olukhoyo kunokuba licebo elihle, ngakumbi ukuba ngaba usulelo luye lwangamelana namachiza. Imveliso kuthiwa iphakathi kwezona zonyango zinamandla zokulwa intsholongwane kaGawulayo, kwaye ichazwe ikakhulu kwizigulana ebezithathe amanye amayeza zingakhange zibe nakho ukuphuculwa. Kunokuphakanyiswa kubantu abanokunganyamezelani kweminye imigqaliselo yokulwa intsholongwane kaGawulayo.
I-Fuzeon iqulethe i-enfuvirtide powder njengesixhobo esisebenzayo, esenza ukuba ibe ngummiselo ofanelekileyo wokulwa i-HIV emzimbeni wakho. I-Fuzeon yodidi lwamayeza eyaziwa ngokuba yi-fusion inhibitor. Amachiza okunyanga akweli qela afana neFuzeon, thintela intsholongwane kaGawulayo ekungangeni ziiseli ze-CD4 kwaye ekugqibeleni ayithintele ekuphindeni nasekukhuleni kwenani. I-peptide powder isetyenziswa kunye nezinye iziyobisi ezichasene ne-HIV ukufumana iziphumo ezingcono. Njengoko kukhankanyiwe apha ngasentla, i-enfuvirtide isebenza ngokubopha neeproteni ezenza kube lula ukuba i-HIV isebenze nge-CD4.
Eli nyathelo lenza ukuba kungenzeki ukuba intsholongwane ingene kwiiseli ezimhlophe zegazi kwaye ichaphazele amajoni akho omzimba. Kwiimeko ezininzi, i-enfuvirtide acetate imiselwe abantu abathathe amanye amayeza, kwaye intsholongwane iye yakhula yanganyangeki kwamanye amayeza amiselweyo. Thetha ugqirha wakho ngolwazi oluthe kratya malunga nendlela yokuyithatha ngempumelelo le mveliso.
4. Uyisebenzisa njani i-enfuvirtide powder?
Ngaphambi kokuba uqale ukuthatha eli liyeza, qinisekisa ukuba ufunda imiyalelo yokusebenzisa yomenzi we-enfuvirtide kwileta ephepheni ngaphakathi kwepakethi. Izikhokelo ziya kukunika ulwazi ngakumbi ngendlela yokwenza imveliso. Abanye Abathengisi be-Enfuvirtide siyokubonelela ngezinye zeziphumo ebezingalindelekanga ze-enfuvirtide ukuze wazi ukuba uza kufikelela nini kugqirha wakho. Banika nezilumkiso ze-enfuvirtide ukuze ukhuseleke xa uthatha into.
I-Enfuvirtide yimveliso yenaliti, ngokungafaniyo namanye amayeza okulwa ne-HIV asetyenziswa ngomlomo. Le peptide powder ineemolekyuli ezinkulu ezinokutyunyuzwa kwinkqubo yakho yomzimba xa zithathwa ngomlomo kwaye zisilela ukuzisa iziphumo ezifunwayo. Ngomgubo wepeptide, qiniseka ukuba ufumana ukulungiswa ngokufanelekileyo okanye vumela ugqirha wakho akwenzele. Nangona kunjalo, ugqirha wakho unokukuqeqesha ngendlela yokulungisa i-enfuvirtide powder nge-solvent ngaphambi kokuhambisa inaliti ye-enfuvirtide.
Landela onke amanyathelo okulungiselela kakuhle xa ulungiselela i-enfuvirtide powder. Umgubo kufuneka udityaniswe namanzi angenazintsholongwane kwaye ahlole isisombululo ngokubonakalayo ukuze isisombululo sixube ngokupheleleyo ngaphambi kokuhambisa inaliti.
Qala ngokususa isicaphucaphu kwidipile yethayile yamanzi angalunganga ngenaliti.
Sula i-vial nganye nge-swab ye-alcohol engafunekiyo emva koko uyishiye ixesha elithile ukuze iziqwengana zome-umoya.
Sebenzisa i-3ML yesirinji enkulu kunye nokutsala isplunger ubuyisele kumphawu oyi-1ml, emva koko tyibilikisela umoya kwi-vial engacocekanga yamanzi.
Ngoku faka inaliti ye-syringe enezixhobo kwindawo yokugcina izilwanyana.
Faka isirinji kunye namanzi angcolile kwi-Fuzeon vial kwi-engile.
Emva koko galela amanzi angacocekanga, kwaye uqiniseke ukuba wehla kancinci uye kwiFunzeon powder.
Sukuyixhoma i-vial kodwa sebenzisa umnwe wakho ukuze ucofe malunga nemizuzwana eli-10 ukuba unyibilike.
Xa iqala ukunyibilika, yibeka ecaleni ukuze uchithe ngokupheleleyo enokuthi ithathe malunga nemizuzu engama-45.
Xa uxutywe ngokupheleleyo, isisombululo kufuneka singabi nangombala, sicace, ngaphandle kwamabubhu, ukuba isisombululo sigqutyiwe, sinike ixesha elingakumbi lokunyibilikisa ngaphambi kokuzilimaza. Nje ukuba isisombululo siphelile kwaye kucacile ukuba ungalawula idosi ngoku. Musa ukuthatha ithamo ukuba ubona naliphi na amasuntswana okanye ngaphambi kokuba isisombululo sicace ngokupheleleyo.
Idosi eqhelekileyo kubantu abadala yi-90ml ngosuku ekufuneka ithathwe kabini ngemini. Inaliti kufuneka inikezwe kwingalo yakho ephezulu okanye kwinxalenye ephezulu yethanga lakho. Ukuba unika umntwana imveliso, ugqirha wakho uya kukuxelela ichiza elifanelekileyo kunye nokuba ulisebenzisa kanganani na iyeza. Kuyacetyiswa ukuba ujikeleze iindawo ezinaliti ukuze uzinike ixesha lokuphola. Kwakhona yazisa ugqirha wakho ukuba uthatha amanye amayeza esi sifo ngaphambi kokuba uqalise ukuthatha i-enfuvirtide.
Enfuvirtide Kufuneka sithathwe sisiphi isigulana sikaGawulayo kunye nesifo sikagawulayo ukunyusa amajoni omzimba njengoko sithintela i-virus ekubeni ihambisane neeseli ze-CD4 kunye nokubathintela ekuphindweni. Umthamo, nangona kunjalo, wahlukile kubantwana nakubantu abadala. I-Enfuvirtide synthesis idlala indima ebalulekileyo ekulweni intsholongwane kaGawulayo eye yakhulisa ukunganyangeki kwamanye amayeza alwa nentsholongwane kaGawulayo.
Idosi yabantu abadala ekucetyiswa ukuba i-enfuvirtide ibe yi-90mg ngosuku ekufuneka yahlulahlulwe yaba ziidosi ezimbini. Kuya kufuneka ulawule inaliti nangona ithanga lingaphandle, ingalo ephezulu okanye isisu.
Idosi yonyango yabantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-16 ubudala, yi-2mg ngekhilogra nganye, kwaye umthamo kufuneka uphathwe kabini ngemini. Owona mthamo uphezulu wabantwana abakwibhuleki yobudala eyi-90mg ngosuku. Kubantwana beminyaka eli-17 nangaphezulu idosi leyo icetyiswayo ingama-90 mg ngosuku kwaye kufuneka yahlulwe ibe yidosi ezimbini imihla ngemihla.
Ulahlekile ithamo ye-Enfuvirtide?
Kwimeko apho ukhohlwa ukuthatha i-enfuvirtide yakho ye-HIV, yithathe ngokukhawuleza, uyakukhumbula. Nangona kunjalo, ungatsiba idosi ukuba sele lixesha lokuba kuthathwe idosi elandelayo. Sukusebenzisa idosi eyongezelelweyo ukwenza oko kungaphoswa; kungakhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu. Kwakhona, khumbula ukufumana unyango lwakho olulandelayo kwangethuba ngaphambi kokuba uphume ugqirha uphela.
Kwimeko yalo naluphi na utyekelo olugqithisileyo funa uqwalaselo lwezonyango kwangoko njengoko kunokukubhengeza kwiziphumo ezibi kakhulu.
Xa uthatha i-enfuvirtide acetate musa ukuyifaka injezu edolweni lakho, emqolo, inkaba okanye iibhutsi. Kulumkele nokufaka inal dosage kwizibazi, amabala, ukutyhoboza okanye naluphi na ulusu olungaphilanga. Ukuthatha i-enfuvirtide akukuthinteli ekusasazeni esi sifo, ke kufuneka uhlale ukhusele ngokwesondo, uphephe ukwabelana ngezinto ezibukhali kunye nebrashi yakho yamazinyo. Gcina yonke imiyalelo yethamo ukuze wonwabe. Ngolwazi oluthe kratya, thetha ugqirha wakho ukukukhokela ngeendlela ezahlukeneyo zokuthintela usulelo lwe-HIV.
6. Zithini iziphumo ze-enfuvirtide?
I-Enfuvirtide i-HIV njengalo naluphi na olunye unyango inokukubonakalisa kwiziphumo ezibi ezahlukeneyo kuxhomekeka kwindlela amayeza aza kusabela ngayo kwinkqubo yomzimba wakho. Ngamanye amaxesha iziphumo ze-enfuvirtide zibangelwa kukusela kakhulu okanye ukusetyenziswa gwenxa. Nangona kunjalo, kukho ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga ziqhelekile kubo bonke abasebenzisi be-enfuvirtide. Ukugcinwa kakubi kwe-enfuvirtide kunokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu. Ezinye zezinto eziqhelekileyo Iziphumo ezibi ze-Enfuvirtide zibandakanya;
Ukuthanda ukutya, isicaphucaphu, urhudo kunye nokuqunjelwa
Iintlungu, ukudumba okanye ukucaphukisa kwiindawo zokujova
Ubuthathaka bemisipha kunye neentlungu
Fikelela kugqirha wakho kwangoko weva ngezi ziphumo zibi zilandelayo;
Ukudumba okujikeleze intamo yakho okanye umphimbo wakho, ukungabi namandla okanye utshintsho olwenzeka esikhathini
Iimpawu zokusuleleka okutsha okufana nokudumba, ukudumba okanye izilonda ezibandayo.
Igazi kumchamo wakho
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-enfuvirtide zinokwahluka ukusuka komnye umntu ukuya komnye kwaye ke, ungathathi nakanye yazo. Yazisa ugqirha wakho ukuba ngaba iziphumo ebezingalindelekanga azonakalanga emva kwexesha elithile. Ukukhuseleka xa uthatha le mveliso, gcina yonke imiyalelo yedosi enikezwe ngugqirha.
I-Enfuvirtide powder (159519-65-0) abavelisi bahlala bebonisa indlela oza kuyigcina ngayo imveliso xa uyisebenzisa nokuba ungayilahla njani. Umgubo wokucoca ungafakwa kwi-enfuvirtide wepowder kwindawo yokushisa yamagumbi malunga nama-20 ukuya kuma-25 ngokukaCelsius. Nangona kunjalo, ukuba awukwazi ukugcina kwiqondo lokushisa kwigumbi, unokugcina kwifriji malunga ne-2 ukuya kwi-8 degrees Celsius. Kwakhona, gcina amanzi angacocekanga kubushushu begumbi lonke ixesha.
Xa udibanise isicombululo se-enfuvirtide yigcine kwifriji nge-2 ukuya kwi-8 degrees celsius. Isisombululo somxube we-enfuvirtide kufuneka sithathwe ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Sukuyisebenzisa le nto emva kokuba iphelelwe yisikhathi kwaye ungasayithengi xa ityunjana lesikiti lophukile okanye lilahlekile. Emva kokusebenzisa i-enfuvirtide powder, landela izikhokelo ze-FDA malunga nendlela yokulahla ikhiti kunye nonyango olungasetyenziswanga.
Xa uthenga i-enfuvirtide powder kubathengisi abahlukeneyo, qiniseka ukuba wenza uphando olululo ukuqinisekisa ukuba ufumana imveliso esemgangathweni eya kukuqinisekisa ngeziphumo ezihle. Nangona igama le-enfuvirtide yegama iFuzeon luphawu oluqhelekileyo kwimarike, unokufumana imveliso ithengiswa phantsi kwegama lohlobo olunye. Baninzi abathengisi be-enfuvirtide kwimarike, kwaye kuya kufuneka usoloko ulungele eyona ilungileyo. I Amaxabiso e-Enfuvirtide Inokwahluka kumthengisi omnye komnye, ungayisebenzisi njengento ebalulekileyo xa ukhetha umthengisi olungileyo.
Konke kuyo yonke loo nto, kukho isidingo sokuqhubeka nophando lwezonyango kunye nophando lokuchonga ezinye iindlela zokusetyenziswa kwe-enfuvirtide kunye nokusetyenziswa kwayo. Njengemveliso yenaliti eqhelekileyo, abasebenzisi abaninzi baphakamise inkxalabo, kwaye izifundo ezongezelelweyo zinganceda ekuphuhliseni i-enfuvirtide dosage yomlomo. Kungenjalo, le nto inokuphuhliswa ngakumbi ukuba igonywe kube kanye okanye kabini ngenyanga. Okwangoku, i-enfuvirtide ihlala iyeyona ichaphazelekileyo kwaye inamandla amayeza okulwa i-HIV. Zive ukhululekile ukuthetha nodokotela wakho malunga ne-enfuvirtide kunye ne-gp41.
UZhu, X., Zhu, Y., Ewe, S., Wang, Q., Xu, W., Su, S.,… & Zhang, T. (2015). Uphuculo lwe-pharmacological kunye nolwakhiwo lwe-HIV fusion inhibitor AP3 ngaphezulu kwe-enfuvirtide: ukuqaqambisa izibonelelo zesicwangciso sobuchule bokugquma. Iingxelo zesayensi, 5, 13028.
UBlanco, JL, kunye noMartinez-Picado, uJ. (2012). Ukudityaniswa kwe-inhibitors ze-HIV kwizigulana ezinama-ART. Umbono wangoku kwi-HIV kunye ne-AIDS, 7(5), 415-421.
I-Chowdhury, S., & Roy, PK (2016). Imodeli yemathematics ye-enfuvirtide kunye ne-protease inhibitors njengonyango lodibaniso lwe-HIV. Ijenali yaMazwe ngaMazwe yeeNzululwazi eziNgekho mgangathweni kunye nokuBala ngokuSebenza, 17(6), 259-275.